Archive du 20181207
Fifanatrehan-dRavalomanana sy Rajoelina Hipoitra ny tena marina momba ny 2009 ?
Ny alarobia lasa teo, samy nisantatra ny adihevitra mivantana ataon`ny mpomba azy ireo mandritra ny 45 minitra ireo kandidà hifaninana ho filohan`ny Repoblika.
Propagandy fihodinana faharoa Ho mafy kokoa ny fitandroana ny filaminana
Samy miezaka maka ny fepetra sy andraikitra mifanandrify aminy ireo tompon’andraikitra ambony eto amin`ny tany sy ny firenena amin`izao fampielezan-kevitra izao.
Tsy fitandremana ny lalàm-pifidianana Tena mahavoasazy
Samy mikendry ny ho lany avokoa ny kandidà roa hifanadrina amin`ny fihodinana faharoa ny 19 desambra ho avy izao ary hibahan-toerana ny serasera, indrindra amin`izao fotoanan`ny fampielezan-kevitra izao.
Marc Ravalomanana Tena akaiky ny fon’ny tantsaha
Mitombo hatrany ny olona resy lahatra amin’ny kandida Marc Ravalomanana manerana ny lafivalon’ny Nosy, ary maneho fahavononana handrotsa-bato sy hiaro ny safidiny hatramin’ny farany.
Minisitry ny fiarovam-pirenena « Tsy mendrika handalo krizy intsony i Madagasikara »
Natao tetsy amin’ny CEMES Soanierana omaly alakamisy 6 desambra ny lanonam-pamaranana ny fiofanana nandritra ny 4 andro nataon’ireo manamboninahitra avy ao amin’ny tafika izay miompana amin’ny tontolon’ny serasera.
Andry Rajoelina Voahodidina tsy fahamatoram-poto-kevitra
Miditra tsikelikely amin’ny famaranana ny fifidianana izay ho filoham-pirenen’i Gasikara isika ankehitriny ary efa mandeha ny fampielezan-kevitry ny fihodinana faharoa. Mitohivakana ihany koa ireo fanambaran’ny kandida tsy tafita ho amin’ny dingana faharoa. Ao ireo nisafidy ny tsy hanohana na iza na iza.
Andry Rajoelina Noporofoin’i Dadafara fa mpanongam-panjakana
Mitombina tanteraka ny tenin’ny mpandrindra ankapobeny ny fampielezan-kevitry ny kandida Marc Ravalomanana, fa tsy “statique” ny politika fa “dynamique”,
Koike, Lego, Magneva Hitety an’i Madagasikara hampandany an’i Dada
Hifanome tanana hanentana amin’ny fampandaniana ny kandida Marc Ravalomanana n° 25 ka nanainga niala
Amboletran-dRajoelina tany Ambato Fanambaniana ankitsirano ny madinika
Tsy mbola eo amin’ny fahefana akory, dia efa mandeha ny karazana tsindritsindry ataon-dRajoelina sy ny ekipany, raha jerena amin’ny fihetsika amin’ny propagandy.
Taratasin’i Jean Avoahay ilay tisaka oo !!
Miarahaba anao aho ry Jean ! Tena tsy faly amin’ny ataonao kosa aloha aho tamin’ity ee ! Tsy mba mitovy amin’ny tamin’ny voalohany mihitsy.
Filankevitry ny minisitra Nisafoaka i Pierre Houlder, nandao ny fivoriana
Tsy mbola fahita firy fa hafa noho ny hafa ny filankevitry ny minisitra notanterahana teny Ambohitsorohitra ny alarobia 5 desambra tolakandro teo.
Fifehezana ny teknolojia Ilaina ny fitazonana ny manampahaizana eto an-toerana
Tsy azo ihodivirana intsony ny fandrosoan’ny teknolojia manerantany, indrindra amin’izao andron’ny fanatontoloana izao.
Arivonimamo May ny tranon’ireo zazavavy zanaky ny zandary
May ny alarobia alina lasa teo tokony ho tamin’ny 10 ora, ny tranon’ireo zazavavy zanaky ny zandary lavo am-perinasa, beazina ao amin’ny akany ao Arivonimamo.
Sekoly FJKM Hankalaza ny faha-200 nisiany
Mitohy ny taom-pankalazana ho an’ny Fiangonan’i Jesoa Krsisty eto Madagasikara.
Beach Soccer Afrika 2018 Hanainga anio ny delegasiona Malagasy
Rehefa nahazo tsodranon-draiamandreny nomen’ny mpikambana ao amin’ny Comité de normalisation teny Isoraka omaly alakamisy 06 desambra 2018 ny ekipam-pirenena Malagasin’ny taranja Beach Soccer dia hanainga anio
Tsy hiova mihitsy ny mpandrava
Tany misy fanjakana eto fa tsy toy ny tamin’ny tetezamita, hoy ilay tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena ankehitriny manoloana ilay hetsika sy an-kivorivory tetsy Ivato notarihin’ny kandida filoha iray.
International Robotic Challenge Tanora Malagasy ho any Inde
Hotanterahina any Inde ny 14 ka hatramin’ny 16 desambra ho avy izao ny fifaninanana iraisam-pirenena mikasika ny fanamboarana robot karakarain’ny “Indian Institute of Technology de Mumbai”.
TANORA MANAMPAHAIZANA Mitombo isa hatrany eto amintsika
Mitombo isa hatrany ireo tanora manampahaizana eto amintsika. Miisa 80 mianadahy indray izy ireo no indray navoakan’ny sekoly ambony ISFPS Leader eny amin’ny 67 ha teny Ambohimanambola omaly misalotra ny anarana Fanilo.
Taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza Azo ahena amin’ny fanatsarana ny kalitao
Nampahafantarina tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy omaly alakamisy 6 desambra ny fandaharan’asa MCSP (Maternal Child Survival Program) izay vatsian’ny masoivohon’ny firenena mikambana vola.
Olona manana fahasembanana Tanora miisa 80 no navoakan’ny CNFFFPSH
Tsy azo tsinontsinoavina ny olona manana fahasembanana fa afaka mandray anjara tsara amin’ny fampandrosoana ny firenena.
Fanafihan-dahalo Ny lehilahy no tena iharan`ny herisetra
Faritra maro eto Madagasikara no tena lasibatry ny asan-dahalo, indrindra any Atsimo. Nisy fanadihadiana sy fidinana ifotony natao tamina faritra telo nampanaovin’ny Tahirin’ny Firenena Mikambana momba ny Mponina (FNUAP),
Mitombo hatrany ary miha maro ireo mpanakanto avy amin’ny lafivalon’ny nosy nisafidy ny hiara-dia amin’ny kandida ho filoham-pirenena laharana faha 25, Marc Ravalomanana.
Lalao Ravalomanana Nampitambatra mpivady miisa 45
Nahazo tombony manokana omaly ireo mpivady 45 isa satria dia ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra,